Ahoana ny fanamorana ny sisin'ny Photoshop ary hanatsarana ny safidinao | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | Photoshop, Cheats, Tutorials
Ny fanaovana safidy tsara dia iray amin'ireo asa mafy indrindra amin'ny Photoshop, amin'ity lesona ity dia hasehonay anao a fika tena tsotra hanatsarana ny safidinao ao amin'ny programa. Ho fanampin'izay, hodinihinay ireo fitaovana lehibe fisafidianana ary hianaranao ny fomba malama amin'ny Photoshop miaraka amin'ny sarontava mifantina.
1 Fitaovana fifantenana ao amin'ny Photoshop
1.1 Fitaovana fifantenana haingana
1.2 Tongasoa majika
1.3 Fitaovana fifantenana object:
1.4 Safidio ny lohahevitra
2 Sarontava mifantina
2.1 Borosio amin'ny sisiny tonga lafatra
3 Fetsy mora hanaovana safidy tsara kokoa sy sisiny milamina ao amin'ny Photoshop
3.1 Safidio ny lohahevitra
3.2 Mamorona sarontava sosona sy ambadika
3.3 Miverina amin'ilay lohahevitra voafantina ary ovao ny safidy
3.4 Manitsy ny tsy fahalavorariana amin'ny saron-tava
Fitaovana fifantenana ao amin'ny Photoshop
Ny fitaovana fifantenana mandeha ho azy dia ahafahanao manangona fotoana be dia be, anananao izany miaraka amin'ny baraovana, mila manindry fotsiny ianao ary mitazona ilay toerana voalaza eo amin'ilay sary etsy ambony.
Fitaovana fifantenana haingana
La fitaovana fifantenana haingana dia miasa toy ny borosy fandokoana. Raha tsindrio ny borosy miaraka amin'ny mari-pamantarana tsara ao amin'ny baran'ny safidy fitaovana, rehefa mandoko ianao dia ampidiro amin'ny safidy. Raha manao fahadisoana ianao ary misafidy bebe kokoa, dia azonao atao ny mitazona ny lakilen'ny safidy raha miasa amin'ny Mac na alt ianao raha miasa amin'ny Windows ianao mba hampiala ny safidy.
Raha te hahita valiny tsara indrindra, «manatsara sisiny»Azonao atao koa ny manova ny haben'ny borosy arakaraky ny filanao.
Manao fifantenana mandeha ho azy amin'ny fanaovana tsindry tokana eo amin'ilay faritra. Amin'ny fandeferana, eto, ao amin'ny menio safidy safidy, lazainao amin'ny Photoshop ny haben'ny tokony ho gamut loko amin'ireo piksela rehefa misafidy dia:
Raha mametraka a fandeferana tena ambany, ohatra, 30, dia hisafidy piksela loko mitovy be
Raha mametraka a fandeferana ambony, ohatra, 60, hanaiky loko bebe kokoa amin'ny fifantenana.
Tsy maintsy manandrana mamantatra ianao hoe iza no tena marina indrindra, miankina amin'ny sary sy ny faritra kasainao hisafidianana izany. Zava-dehibe, marika «malama», ka ny fifantenana mitsabo tsara ny sisiny.
Fitaovana fifantenana object:
Safidio ho azy ny zavatra manodidina ny sary anao. Mila misintona ny totozy fotsiny ianao ary ho hitan'ny programa ilay zavatra.
Safidio ny lohahevitra
Azo alaina ao amin'ny bara safidin'ny fitaovana io rehefa tsindrio ny fitaovana fifidiana mandeha ho azy. Raha izany dia, ny programa dia mifantina ilay zavatra na lohahevitra asongadin'ilay sary.
Rehefa misafidy amin'ny Photoshop ny sarontava mifantina no ho mpiray dina aminao hanitsy lesoka. Ny sarontava mifantina dia misy amin'ny alàlan'ny fanindriana ireo fitaovana fifantina etsy ambony.
Azonao atao ny manamboatra fomba fijery tsy mitovy:
Ny fahitan'ny hoditra tongolo dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra. Amin'ity tranga ity, ny ampahany voafantina dia toa miloko ary ny background (izay tsy voafidy) rakotra efamira. Azonao atao ny milalao ny haavon'ny mangarahara hahitanao izay ampidirinao sy izay ilaozanao.
Soso-kevitra: Amin'ny tranga maivana ny faran'ny sary, dia ampiasao ny fomba fijery mainty. Rehefa maizina ny ao ambadika dia fotsy ny fomba fijery. Amin'ity fomba ity dia ho hitanao fa tonga lafatra ny safidinao ary raha misy halo manodidina ny sisiny. Mahafaty izany ary izany no hamahanay amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny sisin'ny safidy.
Ao amin'ny boaty ho an'ny fitaovana, ao anatin'ny maody "masom-pifidianana", azonao atao fitaovana sasany hanitsiana. Ny tena ampiasaiko dia ny borosy sy ny fitaovana fifantenana haingana. Saingy misy fitaovana iray tena mahaliana hampihenana ny sisiny: ny borosy hatramin'ny sisiny tonga lafatra.
Borosio amin'ny sisiny tonga lafatra
Ity borosy ity milamina ny sisin'ny fifantina hahazoana vokatra tsara kokoa. Izy io dia miasa toy ny borosy hafa rehetra, raha toa ka ao amin'ny baran'ny safidy fitaovana, dia misafidy ny famantarana tsara ampidirinao ao amin'ny fisafidianana ianao ary raha misafidy ny lafy ratsy ianao dia esorinao amin'ilay safidy. Ny haben'ny borosy koa azo ovaina.
Fetsy mora hanaovana safidy tsara kokoa sy sisiny milamina ao amin'ny Photoshop
Ny sarontava sarimihetsika dia tena ilaina tokoa amin'ny fanalefahana ny sisiny sy fanaovana safidy tsara kokoa, fa hasehoko anao kosa izy fika izay hahazoanao safidy madio be ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny zavatra voalohany hataontsika dia mifidy lohahevitra (ampiasao ny sasany amin'ireo fitaovana fifantenana haingana hitanay). Ohatra, hisafidy ny "hisafidy lohahevitra" aho, fa azonao ampiasaina ilay iray izay ahazoana aina indrindra ho anao.
Raha tianao dia azonao atao ny misafidy ny vola ary mamadika ny safidinao fanindriana ny baiko + famindrana + I amin'ny kitendry solosainao, raha manana Mac ianao, na Ctrl + shift + I raha miasa miaraka amin'ny Windows ianao.
Mamorona sarontava sosona sy ambadika
avy eo hamorona sarontava misarona izahay. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fanindriana ilay marika izay aseho amin'ny sary teo aloha. Mamorona loko misy loko mitovy eo ambaniny, misafidy volondavenona tsy miandany. Raha mihalehibe ianao dia ho hitanao fa nisy sisiny ratsy tarehy niditra tao amin'ny safidintsika. Andao hamboarintsika!
Miverina amin'ilay lohahevitra voafantina ary ovao ny safidy
Misy zavatra izay miasa matetika amin'ireo tranga ireo dia manova ny fifantenana. Toy izao no hataontsika:
Fafao ny sosona miloko matevina ary esory ny saron-tava. Azonao atao ny mifehy + Z (Windows) na baikon'ny + Z (Mac) mandra-pahatonganao amin'ilay lohahevitra voafantina na mankanesa any amin'ny kiheba »varavarankely»> Tantara ary kitiho ny dingana «safidio lohahevitra».
Avy eo mankanesa any amin'ny menio ambony ary ao amin'ny tabilao "fifantenana" mitady "manova" ary kitiho ny "fianjerana". Amin'ity hetsika ity dia azontsika atao ny mifidy ny hihena piksely vitsivitsy. Hisokatra ny varavarankely, satria ny halatra nijanona teo an-tsisin-dàlana dia tena tsara, mila ny fisafidianana hanidy 2 na 3 teboka fotsiny no mila izany, ka hapetrakay ireo soatoavina ireo.
Manitsy ny tsy fahalavorariana amin'ny saron-tava
Raha mahita tsy fahalavorariana intsony ianao, dia foana afaka mamorona sarontava misarona ianao. Amin'ny alàlan'ny fanindriana azy ary miaraka amin'ny borosy azonao ahitsy ireo lesoka kely ireo afaka nijanona izany. Tsarovy izany miaraka amin'ny loko mainty izahay manilika ny fifantenana ary miaraka amin'ny fotsy ampidirinay.
Raha tianao ity fikafika ity dia tsy azonao hadino ity iray ity manova ny lokon'ny zavatra mora sy haingana amin'ny Photoshop.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba malama ny Photoshop ary manatsara ny safidinao